Nooca: Machine Anti-duudduub, mashiinka anti-duudduub, hifu
nidaamka Furfuris: sare inta jeer
Codsiga: wiish Face, ka saarida duudduub
Length: 5.0-25mm (1.0mm / talaabo)
dheereynta: 1.0-10mm (0.5 mm / talaabo)
Out xoogga, 0.2-2.0J (0.1J / Step)
dadka Khusayso: oo dhan da '
danab Input: AC 100V-230V
Lixaadka High yool Ultrasound (HIFU) si toos ah samatabbixiyaa tamarta kulaylka maqaarka iyo unugyada subcutaneous in kicin kara iyo cusboonaysiiyo collagen maqaarka iyo sidaas awgeed hagaajinta texture iyo yaraynta dhula maqaarka. Waxaa macno gaaro natiijada facelift ama jirka ah qaadaa oo aan qaliin kasta invasive ama irbado, weliba, gunno ah ku daray nidaamka tani waa in ay jirto ka maqnaa lahayn.
Farsamadan lagu saleyn karaa wajiga iyo sidoo kale jirka oo dhan, iyo sidoo kale, ay u shaqayso si siman si fiican u siiyaan dadka oo dhan midabada maqaarka, in la barbardhigo in laser iyo nalalka garaaca wadnaha aad u daran.
13MM baruurta RARITAAN
Codso xoojinta sare diiradda ultrasound, dhalin tamarta diirada oo la tag deeoer galay cellulite ah in ay jebiyaan cellulite. waa gudagal, cajiib ah oo dheer la soo dhaafay tratement wax ku ool ah si loo yareeyo baruurta, gaar ahaan caloosha iyo bowdada.
xoojinta High diiradda diirada ultrasound ee baruurta of 13mm (qoto dheer ee wax lays), kulaylinta ilaa unugyada baruurtii, lagu biiriyo tamar sare iyo wax lays wanaagsan si loo xaliyo baruurtii, inta lagu guda jiro daawaynta, triglyceride iyo dufan faafiso acid by habka shiid, iyo ka vessal iyo nurve aan la dhaawacmi doona.
1. DS-4.5D inta jeer 4MHZ loo isticmaalo gudbinta tamarta sare ultrasound diiradda maqaarka, unugyada subcutaneous, ultrasound si dhex gelin maqaarka si qoto dheer ah 4.5mm, si toos ah daaha SMAS subcutaneous, sameynta "xinjirowga kulaylka" gobolka, beegsaday maqaarka dhumuc weyn, sida dhabannada, iwm
2. DS-4.5S mawjadaha 7MHZ loo isticmaalo gudbinta-tamar sare ultrasound diiradda maqaarka, unugyada subcutaneous, ultrasound si dhex gelin maqaarka si qoto dheer ah 4.5mm, si toos ah daaha subcutaneous SMAS, beegsaday maqaarka u khafiif ah, sida foodda , dhuuban iyo qoorta.
3. DS-3.0 for gudbinta hirka sare ee 8 MHz diiradda tamarta ultrasound galay lakabka maqaarkaba ah ee unugyada maqaarka, ultrasound si dhex gelin maqaarka si qoto dheer ah 3.0mm, ayaa mas'uul ka ah kaakicin maqaarka ee lakabka dermal of collagen, wax ku ool ah kor loogu qaado saamaynta xoojinta ee dulmar ah, laakiin sidoo kale hagaajiyo daloolada weyn iyo in la yareeyo muuqaalka kore ee qabsatay.
4. DS-1.5 noqnoqoshada 10MHZ loo isticmaalo gudbinta-tamar sare ultrasound diiradda si nudaha epidermis, ultrasound si dhex gelin maqaarka si qoto dheer ah 1.5mm, ayaa mas'uul ka ah kaakicin epidermis maqaarka ee unug u khafiif ah.
5. mat-13mm xoojinta sare diiradda diirada ultrasound ee baruurta of 13 mm (qoto dheer ee wax lays), kulaylinta ilaa unugyada baruurtii, lagu biiriyo tamar sare iyo wax lays wanaagsan si loo xaliyo baruurtii.
1. Halkii wiishka dhaqanka qaliinka wejiga leh farsamo non-invasive.
2. Adkay dhula maqaarka, loo hagaajiyo dhula iyo calaamadaha kale ee gabowga.
3. Iyada oo gudbiye gaar ah, gudbinta ka tabinta dusha maqaarka of-tamar sare ah ultrasound diiradda si lakabka SMAS ah.
4. SMAS foosha: hagaajay collagen, foosha fiber elastine.
5. In lakabka maqaarka si loo soo saaro diirada ku qeexan heerkulka badan kor 65-70 degrees in waqti gaaban ama kor diiradda Sonic tamar sare, la xirrira "daawo kulaylka" aagga, unugyada diiradda yihiin bedesheen, ka dibna ablation, fascia horumar degdeg ah, si loo gaaro saamayn duudduub isku qurxiyo
6. Aan-faafin, waqti lahayn in ay nastaan ​​qalitaanka ka dib, ultrasound oo aan irbado, qaliin lahayn, ma duudduub raad isbedel maqaarka.
7. xir da 'kasta, rag iyo dumarba.
8. qalabaysan noocyo kala duwan oo heerar kala duwan oo maqaarka gudbiye warshadu hawada tamarta, ku-tamar sare diiradda ultrasound gudbiyo layers maqaarka.
9.-xawaaraha sare ee technology gudbinta lahaansho ah 0.1-0.25.
10. Ilaa 15000 khadadka ee gudbiye ah oo israac-sax sare emitter waa saddex jeer in oo ah alaabta la mid ah, aad bay u hagaajinta kharash wax ku ool ah.
11. horumarinta Exclusive of technology broadband 4-10MHZ saarka deggan in si fiican beegmaya technology daaweynta maqaarka oo israac raacsan.
12. Quick & waqtiga daaweynta gaaban: daaweynta 30 daqiiqo hal wajiga.
13. bukaanka qanacsanaanta sare.
14. ee tayada sare, la isticmaalo hooseeyo.
------ nidaamka HIFU Daaweynta -----------
1. nadiifinta maqaarka.
2. photo Qaado iyo suuqii meesha maqaarka dawayn.
3. PT gel sida kaari u dhexeeya gudbiye iyo maqaarka.
4. Mark aagga daweynta, sida ku wareegsan garka, qoorta, labada dhinac ee diyaaradda.
5. A gabal gacanta siman samatabbixiyaa tamarta ultrasound aadka diirada taas oo si ammaan ah maraysa ilaa lakabka subcutaneous at qoto dheer loogu talagalay. Bukaanku waxaa lagu weydiin doonaa in ay jawaab-celin on xoogga kulaylka si nidaamka ma noqon raaxo daran ama xanuun halka lagu gaarayo natiijooyinka si mug leh.
6. dareenka Pay si looga fogaado cidhifka dareemayaasha garka (dareemayaasha mandibular yarna) iyo supraorbital marnaba meesha (orbital supra marna).
7. Ka dib markii la dhameeyo, oo muddo soo kabashada lahayn, waxay isticmaali karaan alaabta iyaSameeo oo ka dhigi-up.
8. Just hal mar, saamaynta buuxda si tartiib tartiib ah aprear doono 2-3 bilood mar.
9. Natiijooyinka ultrasound giijisan maqaarka iyo barti uu noqon doono si tartiib ah in ka badan kuwa soo socda 2 -3 bilood sida cusboonaysiiyaan collagen cusub.
10. Waxaa ka maqnaa ma soo socda daaweyn this. Bukaanjiifka qaar casaan khafiif ah maqaarka, laakiin tani waa ku meel gaar ah. Natiijooyinku waxay sii wadaan si ay u horumariyaan ilaa 9 bilood. Natiijooyinku waxay socon kartaa 1 sanno.
danab Input AC 100V-230V 50Hz-60Hz
Power Output 0.2 in 2.0J (0.1J / STEP)
dheereynta 1.0 in 10mm (0.5mm / STEP)
Dhererka bartilmaanta 5.0 in 25 mm (0.5mm / STEP)
transducer DS-4.5D, DS-3.0, DS-1.5, baruurta-13
1. transducers Immisa la timid mishiinka?
DS3.0MM (caadiga ah)
DS4.5MM (caadiga ah)
2. darbo Sidee badan oo tranducer kasta?
3. daweeyey degaanka?
Indhaha, wejiga, qoorta, xabadka, jidhka.
4. Waa maxay baakadka?
Xirmo Heerka dhoofinta, kiiska alwaax la wiilku afkuu gudaha.
Next: 808nm 800w Vertical laser diode mashiinka ka saarida timaha Joogtada U-808
Ma leedahay damaanad kasta?
Haa, waxaan leenahay. 12 bishii damaanad on mashiinka ciidankii la siiyo. Lix bilood ka damaanad free bedelka gacanta, madaxdii daaweynta, iyo qaybo ka.
Sidee waa adeeg aad-iib aheyn ka dib?
Waxaan leenahay technology xirfadle kooxda taageerada adeegyada aad waqtiga. Waxaad ka heli kartaa caawimada aad u baahan tahay in waqti telefoon, webcam, chat online (hadal Google, Facebook, Skype). Fadlan nala soo xiriir mar mishiinka uu leeyahay dhibaato kasta. adeegga Best waxaa lagu siin doonaa.
idin bari doonaa sida loo isticmaalo mashiinka?
Haa, waxaan ku siin kara dhamaystiran gacanta user iyo isticmaalka video iyo edbinta iyo codsiga. Oo 24/7 adeegga la taliyaha online aad loo hubiyo in wax kasta oo dhibaato iyo markasta oo aad la kulantid, waxaad si fudud u xallin karo. Waa ay fududahay in ay ku shaqeeyaan oo ay qof kasta oo qaba tilmaamaha.
Sidee ku saabsan shixnadda?
Mashiinka waxaa la geeyey doonaa 2-3 maalmood gudahood ka dib marka la helo ee lacagtaada.
Beauty Machine wajiga
Beauty Machine gaariga
Beauty Cijo Qalabka
Beauty Cijo Machine
Bio qaadayso Machine Face Beauty
wajiga Beauty Machine
Baraha Midabka Age dhibco saarista Beauty Machine
Hifu Face qaadayso Machine
Hifu FDA ansixiyey
Hifu Machine wejigaaga kor u
Hifu siilka isbedel
Hifu siilka la adkeeyay ee Machine
Home Isticmaalka Beauty Machine
Jade wajiga Beauty Machine
kor u Face Professional Sono Queen Hifu
Maqaarka Ultra Hifu
Xiinka Beauty Machine
siilka la adkeeyay ee Hifu
Hifu wiish Face saarista duudduub m massage wajiga ...